Thursday 23rd May 2019 10:05:36 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
Date 22/05/2019 (Borame) Somalida waxaa ka mid ah dad badan oo dalkooda, diintooda iyo dadkooda iibsaday waa arrin welligeed soo jirtay oo aad uxun.
Hadaba,somaliya ku baabiyey shisheeye ay soo kaxaystaan waa khaa'inul wadaniin waxaana waajib ah inah inmeel looga soo wada jeesto waayoo waxay dhibato ku yihiindalkooda dadkooda iyo diintooda.
Beesha layidhaadoDaaroodayaa ah cadow ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed ee Islaamka ah , gaar ahaana beesha Hawiye, Beesha Digil iyo Mirifle, iyo Beelweynta Isaaq iyo dhamaanba Umada Somaliyeed meelkasta oo ay joogto . Markiihore waxeey la safnaayeen gummeeystayaashii, Talyaaniga, Ethiopia Ingiriiska, iyagoonaku soo hogaaminayeydhulka ay degaan umada somaliyeedkoonfur, galbeed iyo waqooyiba beesha.
(1)Marka koobaad Beesha Daarood waxay heshiis la gashay gumaystihii talyaanigaheshiiskaas oo ka dhacay qandala iyo caluulaiyaga oo kula heshiiyey in ay soomaliya qabsadaan iyagana u dhiibaan shaqooyinka hoose iyaga oo dhulka tusijiray dagaalkana la gelijiray heshiiskan waxaa galay beesha daarood weliba kuwa layidhaah do Majeerteen..
(2)Markii labaad beesha Daarood waxay la heshiisay gaalkii ManilikII Ethiopia markii ay diideen beelaha somaliyeed ee dega galbeedka sida ciisaha, hawiye,samaroon isaaq,akiishe, iyaga oo kula heshiiyey in uu qabsado dhamaan Somali galbeed, heshiiska oo ka dhacay magaalada hara, heshiiskan waxaa galay kuwa layidhaahdo Absame oo lagalay ethiopianka.
(3)Marka sadexaad Beesha Daarood waxay heshiis lagaleen gumaystihii ingriiska oo ay kula galeen magaalada laasqoray heshiiskan beesha si gaar ah u gashay waa beesha ugu yar daarood ee layidhaahdo warsangeli.
(4)1963 Abdirashiid cali sharmaake oo ka soo jeeday beesha daarood wuxuu Kenya ku wareejiyey Degaanka somalida ee NFD iyaga oo suuqa geliyey in uu wareejiyey raysalwasaarihii markaasi ee maxamed Ibrahim cigaal, aan idin waydiiyee yaa rasalwasaare masaxeexi karaa arin aan madaxweynuhu raali ka ahayn.
(5)Dagaalkii 1964 ee ka qarxay degaanka somalida Ethiopia beesha daarood waxa lasafatay ethiopianka iya oo ciidanka somalida ku jirtay mooyee dagaalka oo ka bilowday ceel ay ka cabayeen geelal ay leeeyihiin beesha isaaq oo Ethiopian ku yidhaah deen ka cabimaysaan, dagaalka markii uu balaadhay beelihii deegaanku waa wada galeen beesha daarood mooyee.
(6)Dagaalkii 1977 beesha daarod waxay samaysay wax kasta oo ay doonayso in uu ciidanku ku jabo, absame wuxuu Ethiopia u ahaa basaas, saraakiisha majeerteen waxay batroolka iyo raashinka ku shubijireen webiga so ciidanka somalida uu saadku uga go'o.
(7)Xukunkii militeriga ahaa ee siyaad bare beesha daarood waxay baa biisay dhamaan ba somaliya iya oo ku baa biiyey hubkaa ruushku siiyey Somalia, waxaa markii hore is xasuuqay iyaga dhexdooda oo isu qabsaday asal iyo soo raac, markii xigay waxaa la xasuuqay somalidii kale sida hawiyah, isaaqa iyo kuwokale oo madan.
(8)02/02/1988 keligii taliye siyaad bare wuxuu heshiis kula galay djabuti mingustu haila maryama si uu ugu soo gacangeliyo SNM, Taasoo sababtay in jabhadii soo gasho wadanka halkaana dagaal ka bilowdo.sidaana somaliya ku burburto.
(9)Burburkii dowladii keligii taliska ahayd kadib markii ay burburtay nimakii daarood waxay keeneen ciido loogu yeedhay UN oo xusuuq u gaytay umada somaliyeed gaar ahaan beesha Hawiye, ciidamadaa oo ay dalbadeen dad ay ka mid ahayeen abdirisaaq xaji xuseen. Iyo niman kale oo daarood ah.
(10)15/081996 General Cumar Xaji Masale oo ka soo jeeday beesha daarood wuxuu ahaa nin kii ugu horeeye ee Somali ah ee ciidamo Ethiopian ah keena gobolka gedo halkaa oo ay ku laaeen wadaado badan iyo shacab badan oo somaliyeed.
(11)1992-1999 qaar ka mid ah beesha daarood waxay wadanka keeneen shirkado ajaanib ah oo qashin iyo sun ku shubay wadank waxaa ka mid ahaa xasan abshir faarax oo bbc du waydiisay dafirayna.
(12)2006 cabdilaahi yusuf wuxuu keenay Cidamo Ethiopian ah oo dhan 50,000 kuwaas oo gaystay xusuuqii ugu xumaa ee somaliya ka dhaca kadib xusuuqii afweyne ka gaystay Somaliland, xusuuqaa oo ay ku dhintaan dad gaadhaya 100,000 kuna barakaceen 1 million oo qof.
(13)2007-2013 beesha daarood waxay kiiniya keentay jubaland gaar ahaan magaalada kismaayo,rag uu ka mid ahaa nin laodhanjiray gaaandi oo culmaani ahaa ayaa keenay ciidamo Kenyan ah iyo Ethiopian.
(14)2012-14ina abdirashiid cali sharmaake wuxuu bada somaliya u ka iibiyey Kenya isag oo qaatay 2 million dollar.
(15)2007-2019 beesha daarood iyada oo adeegsanaysa ciidamada tigrayga iyo niyuu police waxay xusuuq u gayteen dhamaan beelaha somaliyeed qabiil walba oo ay tahay.
Marar badanwaxeey soo adeegsadeen beesha Hawiye, iyagoo u sheegaya ineey isla yihiinsomaliweyn, ayna wadda leeyihiin hal cadaw oo ah Somaliland,weeyna ku guuldaraysteen ineey cadaawad dhex dhigaan Hawiye iyo Isaaq oo ah beelaha Somali ugu waaweyn..
Tan seddexaad ayaa ah midda maanta ay ka waddaanKillinka Shannaadee SoomaalidaItoobiya, iyagoodowlada Ethiopiau sheegaya ineeydhulka somalida Ethiopia ayaga keliyi leeyihiinethiopiayina xukunto ayna meel uga soo wadda jeestaan dhamaan qabiilda kale ee somaliyeed aan ahayn Daarood.
Hadaba, dadka cadaawadda intaa la'eg u qaba umada somaliyeed, iyagoo u soo maraya waji kasta ayaa waxaa ayaan darro ah in maanta ay jiraan dad ka soo jeede beelaha Hawiye, Isaaq, Samaroon, ciise iyo digil iyo mirifle oo la shaqaynaya shaqeenaya nimankaas qaba cadaawadda gaamurtay iyaga oo ku gabanaya magaca iyo dowlada somaliyeed
Waxaana laga mamaarmaan ah in farta lagu fiiqo shaqsiyaadka la shaqeeysta cadawga. Hadaba, waxaan hoos idinkugu soo gudbineeynaa liiska shaqsiyaadka denbiga ka gallay dadkooda iyo dhulkooda ee ka soo jeeda Beesha Daaroodkuwaas oo habbeen iyo maalin diyaar u ah in dadkooda ay hoos geeyeen dalal shisheeyesida Ethioipa, Kenya iyo kuwo kale Isaaq. Taariikhdana waa in lagu qoraa shaqsiyaadka denbiga ka gallay ummaddooda ee danbiilayaasha ah.
Ibrahim Abdi jamac
Sent:22 May 2019 14:36
To:[email protected]; [email protected]
Subject:fadlan ku soo qor maqaalkan qiibaha laeh
Date 22/05/2019 (Borame) Somalida waxaa ka mid ah dad badan oo dalkooda, diintooda iyo dadkooda iibsaday waa arrin welligeed soo jirtay oo aad uxun. Hadaba,somaliya ku baabiyey shisheeye ay soo kaxaystaan waa khaa'inul wadaniin waxaana waajib ah inah inmeel looga soo wada jeesto waayoo waxay dhibato ku yihiindalkooda dadkooda iyo diintooda.
[DEG DEG:-] ''Shimbirki Dadka Cunay Waa Nool Yahay Oo Boqol Haad Ayaa Galbinaaya, Kan La Dilayna Maha Isaga"
Maxaa Ka Jira In La Dilay Gorgorkii Dadka Ku Laayey Gaashaamo?
[Daawo:-] "Waajib Maaha In La Qaato Nambarka Cusub Ee Ay Bixiso Wasaarada jidadka iyo gaadiidka " [ Wasiir Sac
Maxaad Ka Taqaana Maalinta Ka Hor-taga Is-dilitaanka Adduunka?
[Daawo:-] Wararkii ugu Danbeeyey Fashilka Kudhacay Maraykanka Kadib Saliidii Iiran oo La Iibsaday.
[War Hadda Soo Dhacay:-] Hargeysa Oo Ilmaha Lagu Beerayo Dadka Aan Isku Dhalin + Aabaha Iyo Hooyada Oo.....
[Daawo:-] Maayirka Hargeysa Oo Amar Kusoo Rogay Dadka Meelaha Biyo Mareenka Ah Degen.